Agenda Oppositions Justice 2022 ▷ nweta ha emelitere HERE! | Nhazi na ọmụmụ ihe
Mgbe anyị chere echiche banyere ịrụ ọrụ n'ọkwa dị iche iche nke Nchịkwa Ikpe Ziri Ezi, anyị ga-emefu ole na ole mmegide nke ikpe ziri ezi. N'ime ha, anyị na-ahụ ọnọdụ atọ ị ga-eburu n'uche ma nke anyị ga-agwa gị nke ọma taa, ka ị nwee ike ịkwadebe ule gị n'ụzọ kachasị mma.
Agenda na-emegide ikpe ziri ezi
Maka Usoro Nhazi
Nhazi usoro - Ntughari n'efu
Gụnyere syllabi, ule, echiche ziri ezi, ule ịkwa emo na ịnweta ohere ịntanetị na-akwụghị ụgwọ.
Zụrụ Vol. M>
Zụrụ Vol. II>
Zụrụ Vol. III>
Echiche ndị bara uru>
Nhazi usoro - Nkwalite n'ime
Usoro nhazi - Ntughari n'efu
Usoro nhazi - Nkwalite n'ime
Maka Enyemaka Iwu
Isi na Nlekọta Nlekọta Nlekọta
Ndị a ndị mmegide dị na otu A2Ya mere, iji nwee ike igosi onwe gị na ha, ịchọrọ diploma, teknụzụ teknụzụ ma ọ bụ ihe yiri ya. Tụkwasị na nke a, ị ga-anọ ihe karịrị afọ 18, yana obodo ndị Spain, agaghị eme ka ị ghara ime ọrụ ahụ yana ịnweghị ndekọ.
Ọnụ ọgụgụ nke ebe na-arịwanye elu maka nyocha ikpe. Yabụ na ọ bụghị naanị na-elekwasị anya na ahụ nke Usoro Usoro, mana na abụọ ndị ọzọ. N’afọ 2016 ka enwetara ebe dị oke elu, ebe n’afọ 2017 karịrị puku atọ na narị ise. Mgbe maka 3.500 2018 ka enyere. O doro anya, ozi ọma ahụ bụ na ebe ndị a ga-agbakọ. Yabụ na mbido 3.593, oku ọhụrụ ga - apụta, yana ndekọ ebe.
A na-eme atụmatụ na ule nke otu a na - eme n’etiti afọ 2019, dị ka o mere na afọ ndị gara aga. Ọ bụ eziokwu na data a niile n'ụdị ọgụgụ na-ekpuchi isi atọ nke mmegide ikpe. Maka na Usoro Nchịkwa, ọnọdụ ndị ahụ na-agbadata ntakịrị. N'ime ha niile, naanị 506. akpọela oku ugbu a ọ ga-echere ka akpọọ oku ọhụrụ ị nwere ike ịchọta na webụsaịtị nke Mịnịstrị nke Ikpe Ziri Ezi.
Nkebi nke m: Iwu iwu, ikike dị mkpa na nhazi nke steeti.
Isiokwu 1: Iwu Spanish nke 1978.
Isiokwu 2: Ikike nha anya na ịkpa oke. Nchedo megide ime ihe ike nwoke na nwanyị.
Isiokwu 3: Gọọmentị na nchịkwa.
Isiokwu 4: Nhazi mpaghara nke Steti.
Isiokwu 5: European Union.
Akụkụ nke Abụọ: Nhazi na nhazi nke usoro ikpe.
Isiokwu 6: Ike ikpe
Isiokwu 7: Nhazi na ikike nke ụlọ ikpe na ikpe ikpe I.
Isiokwu 8: Nhazi na ikike nke ụlọ ikpe na ikpe nke abụọ II.
Isiokwu 9: Ikpe ziri ezi nke Udo.
Isiokwu 10: Ikike ụmụ amaala tupu ikpe nkwụmọtọ.
Isiokwu 11: Ime ka ọrụ ikpe ghara ịdị na-aga n'ihu: ọfịs ikpe ọhụrụ.
Isiokwu 12: Odeakwụkwọ nke ikpe.
Isiokwu 13: Ozu nke ndị ọrụ gọọmentị na-ahụ maka Nchịkwa nke Ikpe Ziri Ezi.
Isiokwu 14: General Corps M
Isiokwu 15: General Corps II.
Isiokwu 16: Syndical nnwere onwe. Ikike iku. Ahụike na mgbochi nke ihe egwu dị na ọrụ.
Nkeji III: Usoro iwu
A) Iwu ndi niile n’eme n’obodo.
Isiokwu 17: Ajụjụ niile gbasara usoro obodo I
Isiokwu 18: General ajụjụ usoro obodo II
Isiokwu 19: Ikike na ikike.
Isiokwu 20: Ebe na oge a na-ekpe ikpe.
Isiokwu 21: Usoro omume nke ikpe na ndị ode akwụkwọ ụlọikpe.
Isiokwu 22: Ọrụ nke nkwurịta okwu na ụlọ ikpe ndị ọzọ na ndị isi.
Isiokwu 23: Ọrụ nke nkwukọrịta maka ndị ọzọ na ndị ọzọ sonyere na usoro a.
Isiokwu 24: Akwụkwọ ikpe na akwụkwọ.
B) Usoro obodo
Isiokwu 25: Usoro Iwu na Iwu Iwu Obodo.
Isiokwu 26: Ikpe nkịtị.
Isiokwu 27: Ikpe ikpe.
Isiokwu 28: Usoro pụrụ iche M: Usoro maka ikpe ikpe nke akụ.
Isiokwu 29: Usoro pụrụ iche II: Paykwụ ụgwọ maka usoro ịkwụ ụgwọ na ịgbanwe ikpe.
Isiokwu 30: Usoro alụm di na nwunye na klaasị ha. Usoro maka incapacitation nke ndị mmadụ.
Isiokwu 31: Usoro afọ ofufo ikike.
Isiokwu 32: Akụrụngwa.
Isiokwu 33: Akụrụngwa ndị ọzọ.
Isiokwu 34: Ike igbu.
Isiokwu 35: Ego gburu.
Isiokwu 36: Usoro mmanye.
Isiokwu 37: Ego na-abụghị ego.
Isiokwu 38: Mgbochi usoro.
Isiokwu 39: Efu na mmefu usoro.
C) Ndebanye aha obodo
Isiokwu 40: Aha ndebanye aha m
Isiokwu 41: Akwụkwọ ndekọ obodo II
Isiokwu 42: Ndebanye aha obodo III
D) Usoro mmebi iwu
Isiokwu 43: Usoro mmebi iwu
Isiokwu 44: Ndi otu omempụ.
Isiokwu 45: Nchịkọta.
Isiokwu 46: Mgbochi usoro.
Isiokwu 47: Oge etiti.
Isiokwu 48: Ihe akaebe.
Isiokwu 49: Abbreviated usoro.
Isiokwu 50: Usoro maka ịgba akwụkwọ ọsọ ọsọ nke ụfọdụ mpụ.
Isiokwu 51: Usoro n'ihu ụlọ ikpe juri.
Isiokwu 52: Nchedo ikpe n'ihu ụlọ ikpe nke ime ihe ike megide ụmụ nwanyị
Isiokwu 53: Usoro nke ibu ọrụ mpụ nke obere.
Isiokwu 54: Nhazi nke ikpe na obere mpụ.
Isiokwu 55: General usoro ịrịọ arịrịọ na usoro ikpe mpụ.
Isiokwu 56: Imezu ikpe ahịrị ikpe.
E) Usoro esemokwu na nhazi ọrụ
Isiokwu 57: Esemokwu-nhazi mkpesa M: Organizationtù nke ikike.
Isiokwu 58: Esemokwu-nhazi mkpesa II: Usoro ikike, nkwado iwu, nnọchite anya na agbachitere. Omume ịma aka.
Isiokwu 59: Mkpesa na-achịkwa esemokwu III: Usoro mbido, ịdebanye akwụkwọ mkpesa na ịrịọ na faịlụ ahụ. Ọnọdụ nke ndị na-azara ọnụ na nnabata nke mkpesa.
Isiokwu 60: Mkpesa na-achịkwa esemokwu nchịkwa IV: Nchọpụta na azịza. Nwale, lee ma mechie ya. Ahịrịokwu.
Isiokwu 61: Abbreviated usoro na esemokwu-nhazi ubi.
Isiokwu 62Ihe ndi ozo n'usoro esemokwu-nhazi.
Isiokwu 63: Usoro pụrụ iche.
Isiokwu 64: Ndokwa nkịtị ka esemokwu-nhazi usoro.
F) Usoro esemokwu na nhazi ọrụ
Isiokwu 65: Usoro oru.
Isiokwu 66: Izere usoro ahụ.
Isiokwu 67: Usoro pụrụ iche.
G) regulationskpụrụ iwu azụmahịa
Isiokwu 68: Asọmpi nke ndị ji ụgwọ.
Mmemme mbụ: Ọ bụ a otutu nhọrọ ajụjụ, na 100 ajụjụ tinyere 4 idobere ajụjụ. Onu ogugu kacha nta bu ihe 50 na oge maka ule bu 90 nkeji.
Nke abụọ mmega: Ọ bụ ikpe bara uru (tupu ọ bụrụ mmega ahụ nke atọ). Ajuju nke 22 ajuju, ebe akara kacha nta gafere ọ ga-abụ 20 isi na maka nke a, anyị ga-enwe naanị minit 45.
Nke atọ mmega: Ide ederede, ebe anyị ga-ede banyere isiokwu abụọ ndị thelọikpe ahọrọ. Onu kacha nta bu ihe iri ise iji ghafee ule a. Anyị ga-enwe 50 awa iji wuchaa ya.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nkwalite n’ime, mgbe ahụ a ga-enwe mmega ahụ abụọ karịa atọ.
Mgbatị ahụ mbụ: Ọ bụ otutu nhọrọ na 50 ajụjụ. Ule a na-ewe nkeji iri isii na akara ya bụ akara 60.
Nke abụọ mmega: 10 ajụjụ ịza banyere a bara uru ikpe. Oke kachasị bụ ihe 50 na oge iji mee ya, nkeji 60.
Mgbe ọnọdụ ahụ gasịrị, a rutere nke abụọ nke asọmpi ahụ, ebe a gụrụ uru ndị ahụ. Ogo iwu tinye ihe 15, usoro iwu nke ihe ruru 29 awa, tinye isi 3 ọzọ. Ebe ọ bụrụ na usoro ọmụmụ ndị a sitere na 30 ruo 59 awa, mgbe ahụ 5 isi ga-atụkwasị gị. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ha gafere awa 60, mgbe ahụ isi ihe na-agbago 8. Asụsụ na ọkwa B1 ma ọ bụ B2 bụ otu isi ihe. Isi ihe abụọ ma ọ bụrụ na ị nwere C1 ma ọ bụ C2.
Ọrụ na ụgwọ ọnwa nke onye isi ọrụ nke Usoro na Nlekọta Nlekọta
N'ime ọrụ anyị gosipụtara:
Kwadebe ndetu ederede ma ọ bụ nchịkọta ụgbọ ala
Banye ma gosipụta ọdịdị
Mgbe anyị kwuru banyere ụgwọ ọnwa, ekwesịrị ikwu na ọ nwere ike ịdabere na ọnọdụ ọrụ ọ bụla, ọbụlagodi na nchịkwa nke Ikpe Ziri Ezi. Mana ego kwa ọnwa dị gburugburu euro 2.000 na euro 2.800.
Mmegide maka Usoro Usoro
N'okwu a, iji nwee ike ịnwale ule maka nhazi nkeonwe, achọrọ baccalaureate ma ọ bụ ihe nha anya dị ka iru eru ma karịa 18 afọ. Dị ka ọ dị na ihe ndị achọrọ maka Usoro Njikwa Ọchịchị.
M Nhazi akụkụ
Isiokwu 1: Iwu obodo Spanish nke 1978
Isiokwu 2: Ikike nha anya na ịkpa oke na-adabere na okike. Usoro nchebe megide ime ihe ike nwoke na nwanyị.
Isiokwu 3: Ọchịchị na nchịkwa.
Isiokwu 4: Nhazi mpaghara nke steeti n'usoro iwu ochichi obodo.
Isiokwu 6: Ike ọka iwu.
Isiokwu 8: Nhazi na ikike nke ụlọ ikpe na ikpe nke II.
Isiokwu 9: Ikike ụmụ amaala tupu ikpe nkwụmọtọ.
Isiokwu 10: Ime ka ụlọ ọrụ ikpe bụrụ ọgbara ọhụrụ: Ọfịs ọhụrụ na-ahụ maka ikpe.
Isiokwu 11: Odeakwụkwọ nke ikpe.
Isiokwu 12: Oru nke ndi oru obodo na oru nke ikpe ziri ezi.
Isiokwu 13: Isi ozu m
Isiokwu 14: Isi ozu II.
Isiokwu 15: Syndical nnwere onwe. Ikike iku. Ahụike na mgbochi nke ihe egwu dị na ọrụ.
II Part usoro iwu
Isiokwu 16: Usoro nhazi na usoro iwu obodo: Usoro ikpe na okwu ọnụ.
Isiokwu 17: Usoro mmanye na usoro iwu obodo.
Isiokwu 18: Usoro pụrụ iche na usoro iwu obodo.
Isiokwu 19: Afọ ofufo ikike.
Isiokwu 20: Usoro mpụ M: Nkịtị, ndebiri na ndị juri.
Isiokwu 21: Ikpe nke ndị omekome II: Ikpe nke mpụ dị nkenke, ikpe ọsọ ọsọ na igbu ya.
Isiokwu 22: Esemokwu-nhazi mkpesa: nkịtị, abbreviated na pụrụ iche usoro.
Isiokwu 23: Usoro ọrụ: Usoro nkịtị, maka mgbasa na usoro Social Security.
Isiokwu 24: Akụrụngwa.
Isiokwu 25: Ebe na oge a na-ekpe ikpe.Isiokwu 26: Usoro nke ikpe nke ndị ọka ikpe na ndị odeakwụkwọ ụlọ ikpe.
Isiokwu 27: Ọrụ nke nkwurịta okwu na ụlọ ikpe ndị ọzọ na ndị isi.
Isiokwu 28: Ọrụ nke nkwukọrịta maka ndị ọzọ na ndị ọzọ sonyere na usoro a.
Isiokwu 29: Aha ndebanye aha m
Isiokwu 30: Akwụkwọ ndekọ obodo II
Isiokwu 31: Akwụkwọ ikpe na akwụkwọ.
Anyị maara na e nyere ihe karịrị ebe 2.000 maka ikpe ziri ezi. Mana kpomkwem maka ahụ a, nke usoro nhazi, ha ruru ebe 800. N'ime ha niile, iri ise na isii nwere ebe dị iche iche e kesara ókèala.
Mgbatị ahụ mbụ
Nkebi nke M: Otutu nhọrọ akwukwo ajuju nwere 104. Na 4 nke ga-edebe. Akụkụ a dị nkeji 75 ma kee ya site na 0 ruo 100 isi. Azịza ndị ziri ezi na-agbakwunye isi 1, ebe azịza na-ezighị ezi na-agbakwunye 0,25. Cheta na ndị a na-aza azaghị akara.
Nkebi nke II: 22 otutu nhọrọ ajuju banyere ihe bara uru. Ule a na-ewe nkeji iri anọ na ise na nhazi ya site na 45 ruo 0 isi. Azịza ọ bụla ziri ezi ga-agbakwunye isi 40, azịza na-ezighi ezi na-ewepụ ihe 2. Ọ bụ ezie na azaghị, ọ ga-abụ 0,50 isi. Iji gafee ule a, ị ga-achọ 0,25 isi. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike ịga n'ihu na mmega ahụ ọzọ ma ọ bụ akụkụ nke ule ahụ.
Nke abụọ mmega
Ọ bụ gbasara ide ihe ederede na Okwu. Abụọ ọsọ na usoro bara uru. I nwere nkeji iri na ise iji mee akụkụ a. Akara gị ga-abụ isi iri atọ.
Nkwalite nke obodo
na ebe dị maka nkwalite nke mmegide nke nhazi usoro ha bụ ụmụaka. Anyị nwere ebe 219, bụ nke a na-ekesa na mpaghara dị iche iche kwụ ọtọ. Iji nweta nkwalite dị n'ime ya, enwekwara usoro chọrọ:
Nwee akara ma ọ bụ ogo mmụta.
Bebụ onye ọrụ bekee na-enyere ndị ọrụ ikpe aka.
Chọpụta agadi nke ihe dị ka afọ abụọ, ma ọ bụ dị ka onye ọrụ bekee, obere oge ma ọ bụ dochie.
Ule maka nkwalite nke ime ga-enwe mmega abụọ:
Mgbatị ahụ mbụ: 50 ọtụtụ nhọrọ nhọrọ. Ga-enwe 60 nkeji iji wuchaa akụkụ a. Azịza ọ bụla ziri ezi na-agbakwụnye isi abụọ, azịza na-ezighi ezi na-ewepụ isi 0,5.
Nke abụọ mmegaGwuo ederede na Microsoft Word na kọmputa. Ule a na-ewe nkeji iri na ise. Kedu ihe bara uru? Ma usoro na ọsọ nke ederede na mmepe.
Maka akara ikpeazụ, a ga-eme ngụkọta nke omume ndị a. Mana ekwesiri iburu n'uche na okenye na ọnọdụ a ga-ejide ga-adị mkpa, yana iru eru ndị ọzọ ma ọ bụ usoro akwadoro.
Ọrụ a ga-arụ maka ahụ Usoro Usoro
Nkwadebe nke nkeji, yana ọkwa ma ọ bụ usoro.
Nhazi nke okwu dị iche iche ma ọ bụ nhọpụta.
Dị ka ọ dị n'akụkụ nke ọzọ nke mmegide nke ikpe ziri ezi, ụgwọ ikpeazụ nwere ike ịdị iche. Mana ekwesịrị ikwu na ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọnwa ọ nwere ike ịbụ gburugburu 1800/2400 euro.
Nguzogide maka onye enyemaka ikpe
Na nke a anyị na-eche ihu a otu asọmpi C2. Ọ bụ ya mere iji nweta ha, anyị ga-achọ onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ akara nhata. N'otu ụzọ ahụ gara aga, ị ga-abụrịrị afọ 18 ma nwee mba Spanish.
Na mgbakwunye na ihe ndị a na-ahụkarị na nke ndị gara aga, a ghaghi ikwu na maka mmegide nke Nkwado Ikpe ihe dị ka oche 525. Ejirila 37 n'ime ndị 525 ahụ ma ndị ọzọ kesara n'akụkụ ụwa niile.
M Akụkụ nke nzukọ
Isiokwu 1: Iwu Spanish nke 1978
Isiokwu 4: Nhazi mpaghara nke steeti.
Isiokwu 9: Nchịkọta ikike nke ụmụ amaala n'ihu ikpe ziri ezi.
Isiokwu 10: Ime ka ọrụ ụlọ ọrụ ikpe ghara ịdịte aka.
II Usoro Iwu
Isiokwu 16: Usoro nkwuputa: Ọnwụnwa nkịtị, nnwale okwu na usoro pụrụ iche.
Isiokwu 17: Usoro mmezu: ego na ego.
Isiokwu 18: Usoro ikpe ndị omekome: Nkịtị, nkebi nkenke, ikpe gbasara obere mmejọ na ndị juri.
Isiokwu 19: Usoro esemokwu-nhazi: ndị nkịtị, ndị nkenke na ndị pụrụ iche.
Isiokwu 20: Usoro ọrụ - Usoro nkịtị yana maka mgbasa. Usoro nchekwa ọha.
Isiokwu 21: Ebe na oge ikpe ikpe.
Isiokwu 22: Usoro nke ikpe nke onye ọka ikpe na onye ode akwụkwọ ụlọikpe. Iwu nke Ozi gbasara ego obodo.
Isiokwu 23: Ọrụ nke nkwurịta okwu na ụlọ ikpe ndị ọzọ na ndị isi.
Isiokwu 24: Ọrụ nke nkwukọrịta maka ndị ọzọ na ndị ọzọ sonyere na usoro a.
Isiokwu 25: Ndebanye aha obodo.
Isiokwu 26: Echiche nke faịlụ ikpe na akwụkwọ.
N'okwu a, maka nyocha asọmpi nke odeakwụkwọ ikpe, naanị ị gafere ule. Mana ee, ọ ga-enwe akụkụ abụọ ma ọ bụ mmemme abụọ iji buru n'uche.
Mgbatị ahụ mbụ: Ule usoro iwu ụdị na iwepu. Ọ ga-abụ ọtụtụ nhọrọ na ajụjụ 104. Anọ n'ime ha ga-anọgide na-abụ ebe nchekwa. Akara ga-abụ site 0 ruo 100 isi. Azịza ndị ziri ezi ga-agbakwunye otu isi, ndị na-ezighi ezi ga-ewepu isi 0,25 na ndị na-azaghị azaghị. I nwere ihe dị ka nkeji 75 iji mezue akụkụ a nke ule.
Nke abụọ mmega: Echiche bara uru. Enwere ajụjụ 52 na mkpokọta, ebe ọ bụ na echekwara abụọ n'ime ha. Ndị ziri ezi na-agbakwunye isi abụọ, ndị na-abụghị ndị ziri ezi na-ewepụ isi 0,5. N'akụkụ a, a ghaghị iburu n'uche na ajụjụ ndị a na-azaghị ma ọ bụ na-enweghị isi ga-ewepu 0,25. Maka akụkụ a ị nwere oge nke 60 nkeji.
Ọ bụrụ na ndị kwurula obodo nwere asụsụ gọọmentị, enwere ike ịnwale ule ọzọ n'asụsụ ahụ iji lelee ọkwa ya. Asọmpi ndị a nwekwara 'usoro mgba'. N'ime ya, a ga-atụle uru nke onye iro ahụ (aha, diplọma ma ọ bụ usoro a kwadoro).
Ọrụ a ga-arụ na ụgwọ ọnwa maka ndị enyemaka Enyemaka
N'ime ọrụ nke onye na-enyere aka na ikpe nwere ike ịrụ, anyị ga-egosipụta ihe ndị a:
Debe usoro n'ime ụlọ.
Soro nnweta yana ịhapụ.
Ha nwere ike ịrụ ọrụ dịka ndị uwe ojii ikpe.
Faịlụ nke faịlụ ikpe.
Dị ka ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọnwa ọ bụla, ekwesịrị ikwu na a onye ọrụ nke ahụ ga-akwụ ụgwọ n'etiti euro 1600 na 2000 euro.